« Slam national » faha-9: hampiantrano an’i Souleymane Diamanka | NewsMada
« Slam national » faha-9: hampiantrano an’i Souleymane Diamanka
Manomboka mahazo vahana eto Madagasikara ankehitriny ny slam. Na ireo vahiny aza manome lanja izay fivelaran’ity zavakanto ity izay eto an-toerana. Nasaina izy ireo… Namaly ny antso fa ho tonga !
Hotanterahina ny 1 hatramin’ny 8 desambra izao ny andiany fahasivy amin’ny « Festival international de poésie de Madagascar » na ny « Slam National », hetsika tokana sady goavana, manome lanja sy mampiroborobo ny « slam », endrika vaovao hanehoana ny hakanton’ny literatiora sy ny fahaizana milalao teny.
Iraisam-pirenena tokoa ny hetsika. Miisa sivy ireo poety avy any amin’ny firenen-tsamihafa hanotrona sy handray anjara amin’ireo fandaharam-potoana samihafa, mandritra ny “festival”. Anisan’ny hampiavaka sy hampisongadina ity andiany fahasivy amin’ny « Slam national » ity kosa ny fahatongavan’i Souleymane Diamanka eto amintsika.
Teratany senegaley ity tovolahy ity, saingy lehibe sy miaina any Frantsa. Mpiangaly mozika hip-hop no niantombohany ka izy no mpamoron-kira tao anatin’ny tarika nisy azy. Mahay teny frantsay tsara i Souleymane sady mbola mampiasa ny tenin-drazany, ny “peul”. Ny feony beso, ny fahaizany ireo teny roa ireo no anisan’ny nahasarika ny mpamokatra tamin’ity tovolahy ity.
Ity mpamokatra ity no nikarakara ny famoahana ny rakipeony voalohany, mitondra ny lohateny hoe “L’hiver Peul”, tamin’ny taona 2007. “A capella” izy io, saingy tsy vitsy ny mpanakanto namorona feo tamin’ireo sanganasany. Midika izany fa olona manana ny maha izy azy i Souleymane Diamanka, vahinin’ny “Slam National”. Ankoatra izany, hotanterahina amin’io “festival” io, toy ny mahazatra, ny fifaninanam-pirenena amin’ny “slam”, ahitana mpandray anjara 21.